राेचक खबर Archives - Page 144 of 144 - Purbeli News
बिहेमा बेहुलाले राखे यस्तो माग : उढयाे सबैकाे हाेस हवास !
एजेन्सी । बिहे भन्ने कुरा जिन्दगीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षण भएरै होला बिहेका विषयमा विभिन्न रितिरिवाज चर्चामा आउँछन् अनि यो महत्वपूर्ण क्षणलाई यादगर बनाउनका लागि मानिसहरुले कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । हाम्रो देश तथा छिमेकी भारतमा समेत बिहेमा दाइजो प्रथा कायम छ । यस्ता बाबुआमाहरु पनि छन् जसले दाइजोका लागि आफ्नो छोराको मोलमोलाई गर्छन् । अनी यस्ता बा...
यस कारण सुत्नुअगाडि महिलाले फुकाल्छन् ब्रा
महिलाहरुको भित्री वस्त्र ‘ब्रा’ रातको समयमा सुत्नुअघि फुकाल्नु सहि कि गलत भन्नेबारे विवाद रहिआएको छ । कतिपय महिलाहरु रातको समयमा सुत्दा ‘ब्रा’ले निद्रा बिथोलेको बताउँछन् भने केहि महिलाहरु ‘ब्रा’ लगाएर सुत्दा स्तनको आकार राम्रो हुने र नझोल्लिने दाबी गर्छन् । हालै मेडिकल अनुसन्धानकर्ताहरुले लामो अध्ययन गरेपश्चात महिलाहरुलाई स्तन स्वास्थ्यमा जोखिम हुन...
सोलुखुम्बुकाे एउटा हिमाल , जुन एलियनले उडान गर्थे : वास्तविकता यस्ताे छ ! (भिडियाे सहित)
एजेन्सी । साेलुखुम्बु त्यसैपनि पर्यटकिय क्षेत्रकाे रूपमा परिचित छ । त्यहा रहेका हिउसरीका सेताम्मे हिमाल देखेपछि जाे काेहिकाे पनि मन लाेभिने गर्दछ । अत्याधिक चिसाे ठाउँ र रमणीय वातावरणका कारण साेलुखुम्बुका हिमाली क्षेत्र पर्यटकहरूकाे प्रमुख गन्तब्य बनेकाे छ । तर हालै साेलुखुम्बुकाे एक हिमाल बारे एक अनाैठाे तथ्य बाहिरीएकाे छ । जुन धेरै नेपालीहरलार्इ ...
यी हुन महिलाका १० गुण जसले परिवारलाई समृद्ध बनाउछ
प्राचिन हिन्दु संस्कारमा महिलाको ३२ लक्षणको परिकल्पना गरिएको छ । ३२ लक्षणले युक्त महिलालाई पूर्ण गुणी, संस्कारी मानिन्छ । मानिसमा राम्रो/नराम्रो दुबै गुण हुन्छ । सबै राम्रो गुणले भरिपूर्ण हुन्छ भन्ने छैन । यद्यपी केहि राम्रो स्वभाव र व्यवहारले पनि मानिसलाई उन्नत बनाउँछ । उनीहरुको स्वभाव, सत्कर्म, सत्बिचारले परिवारलाई समृद्ध तुल्याउँछ । १. एक यस्तो...
काठमाण्डौ । कम समय र कम लागतमा राम्रो आम्दानीको विकल्पको खोजीमा रहेकाहरुका लागि मेडिसनल प्लान्ट(औषधीय गुण भएका वनस्पति)को खेती तथा व्यापार निकै लाभदायक हुन्छ । यस्ता प्लान्टको खेतीका लागि न त ठूलो फर्मको आवश्यकता पर्छ, न त ठूलो लगानी नै आवश्यक पर्छ । यी वनस्पतिहरुको खेती तपाईले लिजमा जमीन लिएर समेत गर्न सक्नुुहुन्छ । अधिकांश औषधीजन्य वनस्पति ३ देखि...
यी हुन् १ हजारका लागि नाबालक छोरा बेच्ने बुबा !
भारतको झारखण्ड प्रान्तको पूर्वी सिंहभूम जिल्लाका एक आदिवासीले १ हजार रुपैयाँमा आफ्नो छोरालाई बिक्री गरिदिएका छन् । प्रहरी बिक्री भएका बच्चाको खोजीमा जुटेको बीबीसीले जनाएको छ । यो घटना सिंहभूम जिल्लाको धोलाबेडा पञ्चायतको बारुनिया गाउँस्थित डूमरिया क्षेत्रको हो । यहाँका मुखिया सहदेव मुर्मुका अनुसार बारुनियाको मालीगोडा टोलका भोटा सबरका ६ बालबच्चा छन् ...
कहिल्यै धनी बन्न दिंदैनन् यी ६ बानीले !
काठमाण्डौ । अर्बपति तथा विश्वका सफल मानिसहरुले आफ्नो सफलता पछाडिको कारणको रुपमा आफ्नो राम्रो आनीबानी पनि भन्ने गरेका छन् । सफलताको एउटा प्रमुख कारण आनीबानी पनि हो । सफल मानिसहरु राम्रो आनीबानीलाई सधैं फलो गर्छन् र त्यसैको नियममा बाँधिइरहेका हुन्छन् । व्यक्तिगत र व्यवसायिक जीवन अगाडि बढाउनका लागि समेत आदतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कयौं सफल मानिस आ...